Home News Ciidamada Dowladda oo dhaq dhaqaaqyo Ciidan kawada Deegaano hoostaga Gobolka Gedo
Ciidamada Dowladda oo dhaq dhaqaaqyo Ciidan kawada Deegaano hoostaga Gobolka Gedo
Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa hawlagallo ka dhan ah Al-shabaab waxa ay ka wadaa. deegaanno hoos taga dagmada Baladxaawo ee gobolka Gedo.
Howlgalkan ayaa lagu doonayaa in lagu furo jidadka ay xireen Al-Shabaab ee ju yaalla duleedka degmada Balad-Xaawo oo go’doonsan.
Shalay gelinkii dambe ayaa Al-shabaab iyo ciidamada dowladda waxaa halkaasi ku dhexmaray dagaal culus kadib markii ay Al-Shabaab wadada u galeen Gawaari uu la socday taliyaha amniga degmada Balad-Xaawo.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ayaa waxaa dhaq dhaqaaqyo ciidan oo lagu furayo si isku socodka gaadiidka gobolka Gedo,madaama ay Al-Shabaab culeys saareen degmada Balad-Xaawo.
Laba maalin ka hor ayay Al-shabaab waxa ay weerareen degmada magaalada Baladxaawo,iyaga oo dilay Nabadoon magaalada caan ka ahaa,kaa soo lagu Magacaabi jiray Dhaqane Iimaan.
Previous articleXildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah yeelanaya
Next articleWasiir Beyle oo raadinaya cid uu u saariyo musuq maasuqa lagu soo eedeeyay
Xildhibaan C/qaadir Caraboow oo Balankii Ugu Baxay Jabahadda Macaawisleeyda Iyo Al-shabaab...
Somalia’s al Shabaab says behind Turkish company attack, five dead